Future Archives — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ် အနာဂတ်
ခရီးစဉ် Lee ကများ၏အနာဂတ်
သငျသညျအများစုဟာတစ်ရက်ပ်များနှင့်ဖျော်ဖြေသကဲ့သို့ငါ့ကိုသိ, ဒါပေမယ့်အမှန်တရား, နှလုံးမှာအစဉ်မပြတ်ငါတစ်တရားဟောဆရာဖြစ်သွားပါပြီ.
နေသမျှကာလပတ်လုံးငါဂီတအောင်ခဲ့ပြီးပြီသကဲ့သို့, ငါ၏အအနက်ရှိုင်းဆုံးအလိုဆန္ဒဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောစေခြင်းနှငျ့ယရှေုခရစျ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ဘုန်းအသရေကိုကြေညာဖို့ခဲ့. ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာငါအများပြည်သူစင်ပေါ်မှာကလုပ်ဖို့ဂီတသုံးစွဲဖို့အခွင့်အလမ်းခဲ့တယ်. ငါကအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒုတိယခစျြရင့်ခြင်းနှင့်ငါထူးချွန်နှင့်အတူကလုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်. နှစ်တွေ, ငါသည်ဘုရားသခင်အကြှနျုပျကိုချေါနှင့်ဂီတစေမယ့်ငါ့ကိုတပ်ဆင်ခြင်းခံစားခဲ့ရပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းတရားကိုဟောပြောဖို့နဲ့ရေးသားဖို့.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါ wrote ဒါကြောင့်ဖွင့် အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ, ငါ၏အနောက်ကွယ်ကသတင်းစကားသို့နက်ရ​​ှိုင်း dives တဲ့စာအုပ် စံချိန် တူညီသောခေါင်းစဉ်၏. ငါနောက်ဆုံးပြိုလဲကြေညာခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ငါမဖြစ်ရပြီအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်တာခရီးသွားလာမရမယ်လို့လည်းဖွင့်. ငါသစ္စာရှိသောသင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ, နှင့်သာတကယ်ဒေသခံတစ်ဦးအသင်းတော်များ၏အခြေအနေတွင်ဖွစျနိုငျ. ဒါနဲ့ဝါရှင်တန်၌ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်ညီဓမ္မဆရာများကနေလေ့လာသင်ယူမှုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အချိန်ကိုယူပြီးတာပါ, DC က. ဆန္ဒရှိသခင်ဘုရား, ငါသည်ငါ၏အသင်းတော်ကိုကြားမှာဝန်ထမ်းများအပေါ်အစေခံအဖြစ်, ငါပါလိမ့်မယ်…